Top 5 Tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc loại nào tốt nhất hiện nay | Muasalebang - Muasalebang
Top 5 Tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc loại nào tốt nhất hiện nay | Muasalebang
Đang Đọc: Top 5 Tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc loại nào tốt nhất hiện nay | Muasalebang in Muasalebang
Amafutha abalulekile kaphayini obomvu ini? Yiziphi ukusetshenziswa kwamafutha abalulekile kaphayini obomvu? Futhi yimaphi amafutha abalulekile kaphayini obomvu waseKorea atholakalayo namuhla? Lona ngomunye wemibuzo evame ukubuzwa kulezi zinsuku. Uma futhi uzibuza ngalolu daba, sicela ubheke ukwabelana okuningiliziwe kwe-Phong Reviews kulesi sihloko ukuze uthole ulwazi olunembile mayelana nalolu hlobo lomkhiqizo. amafutha lokhu.
1 Yini amafutha abalulekile kaphayini obomvu?
2 Ukusetshenziswa kwamafutha abalulekile kaphayini obomvu
3 Imibandela yokukhetha ukuthenga amafutha abalulekile kaphayini obomvu
4 Amafutha angu-5 aphezulu kaphayini obomvu waseKorea ahamba phambili namuhla
4.1 1. I-Korean Red Fine Pine Essential Oil (amaphilisi angu-120)
4.2 2. I-Korean Kwangdong Red Pine Amafutha (amaphilisi angu-120)
4.3 3. I-Korean Cheosongwon Red Pine Amafutha (amaphilisi angu-180)
4.4 4. I-Korean Samsung Pine Mega Max Red Pine Amafutha (amaphilisi angu-180)
4.5 5. Amafutha kaphayini wekhwalithi ephezulu waseKorea Cheon Bi Sol (amaphilisi ayi-180)
5 Indlela yokusebenzisa i-red pine amafutha abalulekile ngokuphumelelayo
Yini amafutha abalulekile kaphayini obomvu?
Amafutha abalulekile kaphayini obomvu iwuwoyela obalulekile okhishwe emaqabunga esihlahla sikaphayini waseKorea. Lesi sitshalo sihlala kuphela ezindaweni ezipholile noma ezintabeni eziphakeme. Ngakho ungayibona ivela eKorea, eChina, eRussia naseJapan.
Amafutha abalulekile kaphayini obomvu anomphumela wokuvula imithambo yegazi ngenxa yokuguguleka kancane kancane kwama-atherosclerotic plaques emithanjeni yegazi. Ingase futhi isetshenziselwe ukudambisa ukulunywa, ukuvuvukala kanye nokomisa kwesikhumba, futhi ilawule ngempumelelo ukujuluka kanye nemihuzuko enegciwane.
Ukusetshenziswa kwamafutha abalulekile kaphayini obomvu
Amafutha abalulekile kaphayini obomvu okwamanje uwumugqa womkhiqizo odumile emakethe namuhla ngoba uletha ukusetshenziswa okuhle ngale ndlela elandelayo:
Isiza ukuhlanza igazi futhi isuse amafutha amaningi, inciphise ukwakheka kwe-cholesterol egazini, ivikele ngokuphumelelayo izifo ezihlobene nenhliziyo, isibindi, izinso, i-excretory system …
Sekela ukwelashwa nokuvimbela izinkinga zesifo sikashukela, umfutho wegazi …
Lawula kahle ushukela futhi usize ukwehlisa ama-enzyme esibindi, usize ukuqinisa nokubuyisela ukusebenza kwesibindi. Ngesikhathi esifanayo, kuyasiza ukusekela ukwelashwa kwezifo zesibindi ezifana ne-cirrhosis, i-hepatitis …
Ukuqinisa amasosha omzimba, ukusiza ukunciphisa izifo ezivamile ezifana nomkhuhlane, i-sinusitis, i-rhinitis noma i-allergies ngesikhathi sokushintsha kwezinkathi zonyaka …
Isiza ukujikeleza kwegazi, inciphisa ubuhlungu bekhanda futhi ikhuthaze izindlala zokugaya ukudla, ivimbele ukwakheka nokusabalala kwamabhaktheriya e-pathogenic kanye nesikhunta, futhi ivimbele izilonda zesisu.
Ngaphandle kwemiphumela emihle empilweni, uwoyela obomvu kaphayini obalulekile Kuphinde kusize abesifazane ukuthi bathuthukise isikhumba sabo, basize ukugcina ubuhle, ubusha kanye nokwandisa ubusha.
Amafutha abalulekile kaphayini obomvu nawo asetshenziswa njengendlela yokwelapha yokulahlekelwa isisindo ephephile ezifundweni eziningi ezahlukene. Isiza ukugcina isibalo esincane, ukuqina kanye nokuguquguquka komzimba.
>>> Inkomba: Izinhlobo ezi-5 ezihamba phambili ze-menthol namuhla
Imibandela yokukhetha ukuthenga amafutha abalulekile kaphayini obomvu
Ukuthi amafutha abalulekile kaphayini obomvu muhle noma cha kuncike ohlotsheni lwamafutha abalulekile owakhethayo. Ukuze umkhiqizo usebenze kahle, kufanele usekelwe kulezi zindlela ezilandelayo:
Khetha amafutha abalulekile kaphayini obomvu akhishwe ngokuphelele ezihlahleni zephayini ezibomvu, izithako ezihambisanayo kufanele zibe zemvelo, ngaphandle kwamakhemikhali ukuze ugweme ukubangela imiphumela emibi uma isetshenziswa.
Khetha uwoyela obomvu kaphayini obalulekile efanelekile ukuthi isifo selashwe ukuze singabangeli ukuphazamiseka kwezempilo.
Kufanele akhethe imikhiqizo yemvelaphi ecacile ukuze agweme ukuthenga izimpahla zomgunyathi, izimpahla zokulingisa ezisezingeni eliphansi eziyingozi empilweni.
Khetha imikhiqizo elungele iminyaka yakho nezici ukuze umkhiqizo ukhuthaze izinzuzo zawo.
Amafutha angu-5 aphezulu kaphayini obomvu waseKorea ahamba phambili namuhla
Kunezinhlobo eziningi emakethe namuhla uwoyela obomvu kaphayini obalulekile imikhiqizo ehlukahlukene enezithako ezihlukene kanye nokusetshenziswa. Ukuze ungadingi ukuzibuza lapho ukhetha ukuthenga uhlobo oluhle lwamafutha abalulekile kaphayini obomvu. Ukubuyekezwa kwe-Phong kuzokwembulela amafutha abalulekile kaphayini obomvu wase-Korea aphambili ayi-5 namuhla kanjena:
1. I-Korean Red Fine Pine Essential Oil (amaphilisi angu-120)
Umkhiqizo wokuqala kawoyela obalulekile kaphayini obomvu u-Phong Reviews angathanda ukwethula kuwe i-Red Fine red pine essential oil. I-Jute ingenye yemikhiqizo yokunakekelwa kwezempilo ebanzi futhi ethuthukile eKorea namuhla. Amaphilisi kawoyela abalulekile kaphayini obomvu obomvu akhishwa emaqabunga esihlahla sikaphayini obomvu angandile asebenza ukusiza ukuqinisa ukumelana nomzimba, ukunakekela impilo kanye nokusiza ukusekela ukuvimbela izifo ngempumelelo.
Amafutha abalulekile kaphayini obomvu we-Red Fine anomphumela omkhulu wokusekela ama-anti-oxidant, adala imiphumela emihle kubasebenzisi ekwelapheni umfutho wegazi ophakeme, amafutha egazi noma izifo zikashukela egazini, ubuhlungu bekhanda, kanye nokuqeda ubuthi esibindini nasemaphashini. Ngesikhathi esifanayo, kusiza ukujikeleza kwegazi, ukulwa nokuvuvukala, kunciphisa ukuthuthumela ezithweni futhi kuvimbele ngokuphumelelayo ukulahlekelwa izinwele.
Ikakhulukazi, umkhiqizo usiza nokunciphisa umthelela wama-radicals mahhala, ukunciphisa i-cholesterol egazini, futhi ngasikhathi sinye, usize ukusekela ukuqedwa koshukela wegazi ezigulini ezinesifo sikashukela ngokuphumelelayo.
Intengo yesithenjwa: 1,950,000 VND / ibhokisi lamathebulethi ayi-120.
2. I-Korean Kwangdong Red Pine Amafutha (amaphilisi angu-120)
I-Kwangdong iwumkhiqizo osebenza ngokukhethekile ekukhiqizeni imikhiqizo ye-ginseng, ngokuqinisekile akuyona into engaziwa kubathengi baseKorea nabaseVietnam. Le mikhiqizo enezimpawu yenze uphawu kubasebenzisi abaningi hhayi kuphela ezweni kodwa naphesheya.
I-Vien Kwangdong uwoyela obomvu kaphayini obalulekile waseKorea Ikhishwe ku-100% wamaqabunga esihlahla sikaphayini obomvu. Lesi yisitshalo esaziswa kakhulu odokotela ekusekeleni ukwelashwa kwezifo ezihlobene nesimiso senhliziyo, ukwehluleka kwezinso, isibindi, isifo sikashukela, nokuvimbela nokusekela ukwelapha izifo eziyingozi ezifana: umdlavuza.
Umkhiqizo kawoyela obalulekile we-Kwangdong red pine uletha imiphumela emihle kanje: Isiza ekudambiseni ukungezwani emzimbeni, iphumuze futhi yakhe umuzwa wokuthula kwengqondo kumsebenzisi. Ikhulula ubuhlungu bekhanda noma i-sciatica. Isiza ukuqeda ama-enzyme esibindi, ukwehlisa ama-enzyme esibindi futhi yehlise i-cholesterol namazinga kashukela egazini.
Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo usiza futhi ukuqinisa ukumelana nomzimba, usize ukuthuthukisa amandla omzimba futhi uthuthukise i-physiology kumadoda nabesifazane abaneminyaka ephakathi. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo usiza futhi ukunciphisa isikhathi sokuphulukiswa kwamanxeba esikhumba, okusiza ukubuyisela amandla omzimba ngokushesha.
Intengo yesithenjwa: 2,300,000 VND ibhokisi lamathebulethi ayi-120.
3. I-Korean Cheosongwon Red Pine Amafutha (amaphilisi angu-180)
Omunye umkhiqizo ongcono kakhulu kawoyela kaphayini obomvu izibuyekezo ze-Phong ezingathanda ukuwutusa kubafundi amafutha kaphayini obomvu we-Cheosongwon waseKorea (amaphilisi angu-180). Lona umkhiqizo wamafutha abalulekile kaphayini obomvu owenziwe ngokukhethekile ngendlela yamaphilisi omlomo we-Samsung brand yaseKorea. Lona okwamanje umugqa womkhiqizo owaziwa kakhulu ngokusebenza kwawo ekwelapheni ikhanda, amafutha omshini kanye nokuhlanzwa komzimba.
Amaphilisi e-Korean Cheosongwon red pine amafutha abalulekile akhishwa i-100% yamaqabunga kaphayini obomvu aqukethe izinhlobo ezingaphezu kuka-5000 zezithako ezisebenzayo ezivela emvelweni, kuhlanganiswe nezithako eziningi ezisebenzayo ezinemiphumela eqinile yezokwelapha, njenge: terpenes, Essential amino acid, amavithamini, flavonoids kanye ama-polyphenols. Umkhiqizo unomphumela wokusekela ukuhlanzwa kwegazi, ukuqedwa inani le-cholesterol egazini, usize ukwandisa ama-capillaries nokuqeda i-uric acid, ukuvimbela ngokuphumelelayo izingozi.
Ngaphezu kwalokho, Amafutha kaphayini obomvu we-Cheosongwon futhi unamandla okusekela ngenkuthalo ekuvimbeleni umdlavuza ophumelelayo njengesibindi, isifuba, isisu, umdlavuza wamaphaphu… Akukhona lokho kuphela, lo mkhiqizo kawoyela obalulekile unamandla okuqeda ubuthi kubantu.Ukusetshenziswa njalo kotshwala, okuphansi ama-enzyme esibindi futhi athuthukise ukusebenza kwesibindi ngempumelelo. q
Ngaphezu kwalokho, uwoyela kaphayini obomvu we-Cheosongwon nawo unomphumela wokwenza isikhumba sibe sihle, sisekele ukwehla kwesisindo somzimba, sithuthukise ukumelana nomzimba ukuze silondoloze ubusha nokwandisa ikhono lengqondo-yokuphila kwabesifazane.
Intengo yesithenjwa: 1,800,000 VND/ ibhokisi lamaphilisi angu-180.
4. I-Korean Samsung Pine Mega Max Red Pine Amafutha (amaphilisi angu-180)
I-Pine Mega Max iwumkhiqizo wamaphilisi kawoyela obalulekile kaphayini obomvu akhiqizwa yi-Samsung brand yaseKorea. Lona umkhiqizo okhishwe 100% emaqabunga namagxolo esihlahla sikaphayini obomvu, kwenziwa ucwaningo oluqinile nokukhiqizwa. Ngaphezu kwalokho, le thebulethi kawoyela obalulekile kaphayini obomvu iphinde ihlolwe ikhwalithi yomkhiqizo yi-Korean Health and Medical Quality Management Agency ngaphambi kokuthi ilethwe kubasebenzisi.
Ngesithako esiyinhloko esikhishwe esihlahleni sikaphayini obomvu, ithebhulethi I-Pine Mega Max Amafutha Ukusetshenziswa kwayo okuyinhloko ukusiza ukuhlanza igazi, ukuncibilikisa i-cholesterol embi egazini, ukusiza ukwandisa ama-capillaries, nokuvimbela ngempumelelo ukushaywa unhlangothi kanye nesifo senhliziyo …
Umkhiqizo usiza ukusekela ukwelashwa kweziguli ezinamatshe ezinso, ukunciphisa imiphumela eyingozi yezinto ezinomsakazo – Usiza ukuvimbela ukukhula kwamangqamuzana abangela umdlavuza. Ngaphezu kwalokho, uwoyela we-Pine Mega Max usiza futhi ukuvimbela izinkinga ezihlobene nomgudu wokugaya ukudla, ukwelapha ngokuphelele umoya omubi. Ngaphezu kwalokho, lo mkhiqizo futhi unomphumela wokwenza isikhumba sibe sihle, ukulahlekelwa isisindo, ukuqinisa ukumelana nomzimba, ukusiza ukugcina intsha kanye nekhono le-psycho-physiological kokubili amadoda nabesifazane ngokuphumelelayo.
5. Amafutha kaphayini wekhwalithi ephezulu waseKorea Cheon Bi Sol (amaphilisi ayi-180)
Umkhiqizo wokugcina kawoyela obalulekile kaphayini obomvu uPhong Reviews angathanda ukwethula kuwe i-capsule I-Korean Cheon Bi Sol amafutha kaphayini obomvu. Lona umkhiqizo osezingeni eliphezulu ovela kumkhiqizo waseKorea i-Cheon Bi Sol. Umkhiqizo uzuze ukwethenjwa okukhulu nokukhetha kubasebenzisi baseKorea nezimakethe emhlabeni jikelele ngokusebenza kwawo.
Amaphilisi kawoyela abalulekile e-Cheon Bi Sol akhishwa i-100% ezihlahleni zikaphayini obomvu, acwaningwe futhi enziwe ngokuya ngamazinga e-GMP. Umkhiqizo uqinisekisiwe ukuthi unemiphumela emihle ekusekeleni ukwelashwa okuzinzile koshukela wegazi. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo ubuye ulethe izinzuzo ezivelele njengokuthi: ukusekela ukulawulwa komfutho wegazi, ukukhuthaza ukujikeleza kwegazi ngendlela engcono. Isiza ngempumelelo ukuvikela izinkinga eziyingozi zomfutho wegazi ophakeme kanye nokuvinjelwa kwemithambo yegazi.
Ngesikhathi esifanayo, kusiza ukuhlanza umzimba, ukukhuthaza ukuqedwa kwamafutha amabi futhi kunciphise imiphumela eyingozi yemisebe yelanga evelele. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo ubuye uhlanganiswe nekhono lokusiza ekwehliseni izimpawu zokuqunjelwa, ukusiza ukuqinisa isikhumba.
Intengo yesithenjwa: 3,900,000 VND/ ibhokisi lamaphilisi angu-180.
Indlela yokusebenzisa i-red pine amafutha abalulekile ngokuphumelelayo
Ukuqinisekisa ukuphepha kwezempilo uma usebenzisa uwoyela obomvu kaphayini obalulekileKufanele uthintane nodokotela wakho, ngokuphelele ungadlulisi umthamo ovunyelwe wamafutha abalulekile.
Imvamisa, usuku ungasebenzisa kuphela amaphilisi ama-2 kuye kwayi-3 futhi uphuze imizuzu engama-30 ngaphambi kokudla, Ngaphezu kwalokho, izingane ezincane kanye nabantu abadala nabo badinga ukusekela isimo sabo sezempilo ukuze balungise inani lesiphuzo ukuze livumelane.
I-athikili engenhla yi-5 ephezulu uwoyela obomvu kaphayini obalulekile Okuhamba phambili kwaseKorea namuhla. Ngethemba, ngalesi sihloko, uzokwazi ukukukhethela umkhiqizo wamafutha kaphayini obomvu ofanele. Ungakhohlwa ukulandela Izibuyekezo ze-Phong ukuze uthole ulwazi oluwusizo kakhulu!
Xem Thêm Trend mặt trăng là gì và giải mã các bí ẩn sau trend mặt trăng | Muasalebang
Cách làm bánh khoai môn lệ phố chiên giòn rụm, thơm ngon, bất bại | Muasalebang
Chọn kem dưỡng ẩm cho da nhạy cảm như nào? Gợi ý Top 15 kem dưỡng ẩm tốt nhất cho da | Muasalebang